News - Fiberglass qashinka
FRP waa maado polymer (Ingiriis: Fiberglass Reinforcde Plastics ama FRP). Weelka qashinka lagu ururiyo ee walxahaan laga sameeyay ayaa ah qashinka marooyinka muraayadaha. Qalabka FRP waxaa markii ugu horreysay loo adeegsaday difaaca qaranka, aerospace, duulista iyo beeraha kale. Horumarinta sayniska iyo teknolojiyadda, waxay si tartiib tartiib ah loogu adeegsaday suuqa wax soo saarka rayidka. Qashinka waxaa laga sameeyaa maaddada balaastigga ah ee la xoojiyay ee fiber galaaska ah, dusha sarena waxaa lagu daboolay lakabka jaakad jel leh shucaaca anti-ultraviolet iyo saameynta gabowga. Badeecadu waxay leedahay muuqaal dhalaalaya iyo midab dhalaalaya, oo suuqyadu si fiican u aqoonsan yihiin. Isla mar ahaantaana, fiyuuska dhalada ah ee lagu xoojiyay qashinka balaastigga ah sidoo kale waa miisaanka, xoogga sare, iyo ka-hortagga daxalka La dagaalanka xatooyada iyo astaamaha kale (fiiri sawirka wixii faahfaahin ah).
Adoo isticmaalaya fiber galaas tayo sare leh iyo soosaarida midab cusbi ah oo la soo dhoofiyay, waxay leedahay awood sare, iska caabin daxalka, aashitada iyo caabbinta alkali, anti-gabowga, cillad ma leh qorraxda hoosteeda, iska caabinta UV, nadiifinta fudud, hawlgalka habboon, awoodda uruurinta badan ee qashinka sanduuqa, cimri dherer iyo cimri dheer, foostada diirka ayaan lahayn wax isdabamarin iyo dib u adeegsi qiimo leh.Waxay leedahay hawo wanaagsan oo wasakhaysan deegaanka. Qaarkood waa safafka xaashida galvanized.
Qashinka ayaa door muhiim ah ka ciyaara deegaanka nool. Waxa jira daasado qashin ah oo ku yaal geeskasta oo bulshada ka mid ah. Waxay ka buuxsamaan qashinka dadka meel mugdi ah. Ma caawin karaan laakiin waxay qaadaan culeys badan waxayna u adkeysan karaan qorraxda iyo roobka. Imtixaanka dabaysha iyo roobka, ku biirinta qashinka ayaa gabi ahaanba looga maarmi karin dhismaha bulshada.
Waagii hore, daasadaha guud ee qashinka guud ahaan waxaa laga sameeyaa caag, bir doofaar, ama bir bir ah. Qashinka caaga ah way fududahay in la libdho waana ololi karaa. Qashin badan oo qashin ah ayaa lagu gubaa dabada sigaarka. Birta doofaarku way daxalaysaa waqti ka dib. Ma sahlana in la nadiifiyo, mana aha mid waara oo saamayn ku yeelan doonta muuqaalka. In kasta oo daasadaha birta ah ee birta ah ay aad u yaryihiin, haddana ma ahan waxyaabaha ugu fiican ee lagu sameeyo qashinka.
Waqtiga dhejinta: Apr-02-2021
Lag Bolts, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, U Bolts, Qaab dhismeedka, Hex handarraabbadeedii, Gawaarida Gawaarida,